Remote File Manager rinowanikwa mahara kwenguva yakatarwa | IPhone nhau
Remote File Manager inowanikwa mahara kwenguva yakati rebei
Vazhinji vashandisi vanoshandisa rinopfuura rimwe gore rekuchengetedza sevhisi. Imwe yeanonyanya kushandiswa, kunyangwe diki diki yekuchengetedza nzvimbo inopihwa nekungovhura iyo account, ndiyo Dropbox. Asi Ndine chokwadi chekuti pamwe neDropbox tinoshandisa Google Drive uye OneDrive. Kana isu tichiwanzoshandisa aya ekuchengetedza masevhisi zuva nezuva, kazhinji tine zvese zviri pamutemo zvinoshandiswa zveaya masevhisi akaiswa. Asi kuve nekushandisa akasiyana application nguva dzese kunova kunetsa. Neraki isu tinogona kushandisa Remote File Manager, chishandiso chinotibvumidza kuti tiwane yakawanda yemakore ekuchengetedza masevhisi: Dropbox, Google Drive, OneDrive uye Bhokisi.
Asi zvinotibvumidzawo kuti tiwane uri kure kumafolda atakagovana pakombuta yedu neWindos, OS X kana Linux, asiwo kune izvo zvemukati izvo isu zvatakachengeta paNAS yedu, patinowana backup nemifananidzo yedu yese, mavhidhiyo, zvinyorwa, mimhanzi ... saka izvo hazviite Izvo zvinodikanwa kuve nechisungo chekuisa yakawedzera software pane maseva pane iyo ruzivo rwatinoda kuwana rwuripo.
Remote File Manager inowanika kwechinguva kurodha pasi zvachose mahara pasina chero chinhu chiri mu-App kutenga. Mutengo wakajairika weichi chishandiso ndeye 4,99 euros saka kana iwe ukashandisa gore rekuchengetedza masevhisi, iwe wave kutotora nguva. Remote File Manager, iri mushanduro 3.1.1, inobata zvishoma zvishoma pane makumi mana MB uye iri muChirungu chete. Kuti ushandise chishandiso ichi, zvinodikanwa kuti isu tinenge tine vhezheni 40 yeIOS yakaiswa pane yedu kifaa. Remote File Manager ndeyekushandisa kwese saka zvinoenderana neiyo iPad, iPhone uye iPod Kubata.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Remote File Manager inowanikwa mahara kwenguva yakati rebei
Pane chero munhu anoziva nzira yandinogona kubatanidza iyo app kubva kune yangu iphone kune yangu windows 10 pc?
Mhinduro ku *
VLC inogadziridzwa uye inowedzera kutsigira kwe3D Kubata
Facebook iri kushanda tekinoroji kuti ikwanise kumaka shamwari mumavhidhiyo